ZVINOTSIGIRA - Beijing Convista Inoyerera Kudzora Zvishandiso Co., Ltd.
CONVISTA haingopa chete technical technical kune inoyerera control mhinduro padanho rekutanga, uye zvakare inoita yehunyanzvi zvinyorwa zvinyorwa zvebasa rese.
Uye yeashure-sevhisi, CONVISTA Munda enjiniya yebasa timu inogona kupa mhinduro inokodzera kune vatengi zvinodiwa pasirese: chapupu uye tekinoroji rutsigiro mukutuma & kutanga danho, kugadzirisa kuvharisa kutarisira, kugadzirisa uye kugadzirisa basa, kusarudzwa kwemidziyo, kugadzirisa uye kudzidziswa kwekushanda.
1．Magadzirirwo anofanira kupihwa
Chinangwa chekupedzisira cheCONVISTA ndechekupa zvinokwanisika kuyerera kudzora mhinduro kumaindasitiri akasiyana achipokana nezvinodiwa nemapurojekiti.
Nhanho1: Chikwata cheinjiniya chichaita, pekutanga, chiongorora mamiriro eprojekiti 'mamiriro ehunyanzvi, maratidziro ehunyanzvi nezvimwe zvakadaro, voita ongororo yakafanira;
Step2: Bazi redu rezvekutengesa rinoongorora vatengi 'zvakakosha & zvekutengesa zvinodiwa uye kupindura zvinoenderana kune mukuru wekutengesa maneja;
Step3: Kubva pane iri pamusoro data, mainjiniya edu achasarudza iyo chaiyo mhando, chaiyo zvinhu, chaipo basa mavharuvhu & maactuator ayo ari kusvika kune izvo zvinangwa zvemapurojekiti, uye zvakare, kune mukana wevatengi, mutengo kuchengetedza ichavewo imwe yezvavanofunga.
Step4: Chikwata chezvekutengesa chichagadzirisa mhinduro kwayo, tumira technical Quotation & Commerce Quotation kune vatengi neE-mail.
2．Quality Simbiso & Hunhu Kudzora
Mafekitori ese anotenderwa neCONVISTA haafanire kungobata mvumo mikuru, kusanganisira ISO9001, API 6D, API 6A, CE / PED, HSE, API 607 ​​/ API 6Fa Fire Safe chitupa,
asi zvakare, inofanirwa kuve neyakagadziriswa maitiro ekudzora kubva pane zvakasvibirira kusvika kune akapedza zvigadzirwa. Iyo fekitori Yemukati Yemhando Yekudzora Vashandi & Facility inofanirwa kuve yakanyanya-inokwanisa kuita Radio graphic bvunzo, Ultra-sonic bvunzo, Dye Inopinda, Magnetic Particles, Positive Material Identifier (PMI), Impact bvunzo, Tensile bvunzo, Kuomarara bvunzo, Moto Safe Bvunzo. , Cryogenic bvunzo, Vacuum bvunzo, Low mupoteri emission bvunzo, yakanyanya kumanikidza gasi bvunzo, Yakakwira tembiricha bvunzo uye Hydro-static bvunzo.
3．Kutsvagisa, Kubudirira uye Kugadzira
CONVISTA ine hunyanzvi hwakawanda mukugadzira vharuvhu, pamwe neakasangana CAD / CAM (Solid Works) masisitimu anonyatsoshandisa mikana yekuvandudza uye kukwikwidzana kweinjiniya mhinduro nepo ichivimbisa kutevedzera zvese zvinodiwa.
CONVISTA anga achinyanya kunetseka mukugadzira mitsva yekugadzira mavhavha akakura ekumanikidza uye tembiricha sevhisi, Cryogenic mavharuvhu Corrosion nemagetsi mavharuvhu uye zvakanyanya-zvakagadzirwa zvigadzirwa zvemamwe masevhisi.